04 / 07 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: 4-ka July, 2019
Dib u cusbooneysiinta Gedikpaşa Multi-storey Car Park wuxuu bilaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan
BB Gedikpaşa Park-ka ọpọlọpọ gawaarida ee loo yaqaan 'Parkrey Car Park' ayaa loo xiray inay dhigato gawaarida iyadoo ay ugu wacan tahay Lam oo ah Dhammeystirka Nolol Joogtada ah "iyo z Bixinta Khatarta". Shaqada joogtada ah ee baarkinka waxaa la dhammeystiri doonaa sida ugu dhaqsaha badan ee suuragalka ah dib-u-shaqeynta ama shaqada dayactirka. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Metro Istanbul Turkey ugu 500 ka mid ah shirkadda!
Metro Istanbul, shirkadda ugu weyn ee Turkiga by Fortune ee go'aaminta 500 500 ah, 983 281 million pounds shabag dakhliga iibka. kaalinta. Isla mar ahaantaana shirkadu waxay ku xiran tahay "Adeegyada Gaadiidka iyo Gaadiidka" [More ...]
Ankara Express waxay diyaarineysaa duulimaadkeeda koowaad berri
Ka dib toddoba sano oo ka timid Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, 5 ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilaabi doonto duulimaadkeeda bisha July (Berito). gaar ahaan [More ...]
YOLDER xubinimadiisa kali kaligeed ugama tegin magaalada Çorlu
Dhegeysiga ugu horeeyay ee shil tareen oo ka dhacay degmada Çorlu ee Tekirdağ, 8 July July 2018 waxaa lagu qabtey Xarunta Culus. YOLDER waxa uu si isdaba-joog ah ula socdaa horumarinta tan iyo maalinta ugu horreysa ee shilalka mana ka tagin xubnoheeda kali ah dhageysiga kowaad. [More ...]
Rize waxay u Bixisaa Wadada Baaskiilka
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu ku dhawaaqay qorshaha labaad ee waxqabadka maalinlaha ah ee 100 gudaha qaab dhismeedka mashruuca si loo dhiso waddo baaskiil ah oo gacan ka geysata dadaalka gaadiidka degmooyinka Deegaanka Rize [More ...]
Waddada cusub ee loo maro Ordu Ring Road
Dowladda Hoose ee Ordu Buyuksehir waxay sii wadaysaa inay ku neefsato taraafikada magaalada iyadoo la raacayo wadooyin kale. Kadib marxaladi ugu horeysay ee Wadada Ordu Peripheral Road ayaa la howl galiyay, Şehit Yalçının Yamaner Boulevard kaas oo isku xira Wadada Peripheral Road wadada Wadada Badda Madow. [More ...]
Ma jiri doonto waddooyin burbursan oo aan lahayn hoosto Erzincan ah
Degmada Erzincan ee magaalada oo dhami way jabtay, iyadoo wadooyinka u hakisay inay sii waddo shaqada oo aan kala go 'lahayn. Maareeyaha Arimaha Bulshada ee Degmada Erzincan Sayniska Kooxda asphalt waxay ka fulinayeen shaqooyin asphalt xaafadaha. [More ...]
Helitaanka garoonka diyaaradaha ee Antalya
Dowladda Hoose ee Antalya waxay ku dartay khadka 600 marka lagu daro khadadka jira 800 iyo 400 si loo fududeeyo marin u helista garoonka diyaaradaha. Wadooyinka khadadka ayaa sidoo kale dib loo habeeyay. Saddexdaas xariiq, garoonka diyaaradaha oo keliya [More ...]
Mugla Wadooyinka Howlaha Waddooyinka Magaalooyinka 2400 Km
Kooxo ka socda Dawlada Hoose ee Magaalada Muğla waxay u dhawaadeen tirada 2400 km ee shaqooyinka wadooyinka. Kooxaha Magaalada Caasimadaha Muğla waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan wadada muwaadiniinta si ay ugu safraan wadooyinka aaminka ah iyo kuwa casriga ah. 2014 [More ...]
Meelaha dadku maro ee Manisa waxaa lagu daryeelay
Dowladda Hoose ee Manisa, wadnaha halbawlaha u ah bartamaha magaalada ayaa dayactirtay dayactirka. Jid-gooyeyaasha lugaynaya ee rinjiyeeyay isla markaana hagaajiyay dabaqa hoose ee Magaala-weynta, is-dhaafsiga ayaa helay muuqaal aad u qurux badan. Manisa [More ...]
Mersin Greater 76 Mashiinka Cusub ee Cusub ee Iibsiga, Gawaarida-Aydiycik Khadka Furan
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Selecter, Mersin muwaadiniinta Mersin waxay ka cawdeen arrimaha ugu caansan ee la xiriira adeegyada gaadiidka dadweynaha ee la xiriira injiilka. Gawaarida Dowlada Hoose ee Magaalaga wey balaari doonaan [More ...]
Mashruuca Channel Channel wuxuu ku yimid Agenda inta uu Erdogan booqanayay Shiinaha?
Gaar ahaan, si aad u dabasocon by dadka Istanbul iyo mashruuca ugu weyn dalka Turkiga ay soo jiidatay leh waxa Arimihii ugu dambeeyey ee mashruuca Istanbul Kanan lagu dhawaaqay taariikhda dhaylo ah samayn? The ardayda mashaariic ka dhexeeya Turkey [More ...]
Shil gaari oo ka dhacay Ankara
13 ee Ankara Bishii December ayaa 2018 sagaal khubaro ah ayaa lagu dilay baaritaanka khubarada shilalka ee YHT, sida lagu sheegay warbixinada. Warbixinta, sababta ugu weyn ee ka hor wakhtiga dhismaha waddada, mashruuca waa la dhammeeyaa wakhtigana lagama maarmaan maahan [More ...]